राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७३ असार ६ सोमबार | ०८:०८
बर्षाैंदेखि मधेशी जनता जातिय अहंकारले ओतप्रोत, नस्सलीय आर्य खस तथा एकल बर्चस्वशाली राज्य सत्ताका विरुद्ध भिडिरहेका छन्। पटकपटक लडाइन्छन्, उठ्छन् र फेरि भिड्छन्।
परिवत्र्तनकामी रुपान्तरणका लागि सडक तथा सदनमा उत्रेर राज्य सत्ताका नेतृत्व पंक्तिलाई हाँक दिँदै मधेश मैदानमा कस्सिएका छन् । राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, सम्मानवाद वा बजारवाद केही पनि सँग यहाँका नस्सलीय राज्य सत्तामा बर्षाैदेखि कुण्डली मारेर बसेका सत्तारुढ दल, राज्य सत्ताका पक्षपोषण गर्ने कथित राष्टिय मिडिया, नागरिक समाज, नागरिक अभियन्ता, मानव अधिकारवादीलाई कुनै मतलव छैन् । केवल आफ्ना नस्सलीय राज्य सत्तामा कसरी टिकाई राख्ने हो भने उद्यममै आफ्नो ऊर्जा व्यय गर्छन् यिनीहरु ।
यी मानुष हाम्रा लागि सरकारमात्र होइन, ज्यानमाराको रुपमा परिणत भइ सके । किनभने सय दिनमा ५० भन्दा बढि नेपाली जनता मारिएका छन् । चीर निन्द्रामा लिन यहाँका राज्य सत्तामा संवेदना शुन्यता छाएको छ । यद्धपि आन्दोलनलाई मत्थर तथा तुहाउन अनेकन हत्कण्डा अपनाइए पनि आफ्ना हरेक सेवा, सुविधा तथा हाँसो खुशीलाई तिलाञ्जली दिँदै मधेशले आन्दोलनलाई बढाइएपछि काठमाडौंको सत्ताले बाहिरबाट जतिसुकै आफूलाई दह्रो देखाए पनि भित्रैदेखि हल्लिएको छ ।
मधेशको माग केके हुन् र उनीहरु के चाहन्छन् भन्ने कुरा काठमाडौंको राज्यसत्तालाई राम्ररी थाहा छ । बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । किनभने, मधेशका माग आजैदेखि उठेको होइन । समान्यतया २००७ सालदेखि नै निरन्तर आवाज उठ्दै आएको छ तथा सघन रुपमा २०६२ र ६३ को आन्दोलनभन्दा अघिदेखि नै उठिरहेका छन् । पहिलो संविधानसभाताका पनि यी विषयमा धेरै छलफल र बहस भए । दोस्रो संविधानसभामा पनि बारम्बार छलफल भएकै हो । तीन दलमध्येको एकीकृत माओवादी यी मागहरु बोकेर हिजोसम्म सडक संघर्षमै थियो । मधेशीका माग तथा मुद्दामाथि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुकै पालादेखि बारम्बार सम्झौता पनि भएका छन् । यसमा साक्षी अहिलेका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सबका सब अझैपनि जीवितै भएपनि उनीहरुका विचार भने मरिसकेका छन् । यी सबैका बाबजुद तीन ठूला पार्टीले वार्ताका लागि बसेपनि साकारात्मक र परिणाममूखी हुन सकेको छैन् । चिया विस्कुट, हाइहेल्लोमै वार्ता सीमित हुने गरेको छ, अनि सार्वजनिक गरिन्छ वार्ता सकारात्मक भयो, जो विल्कुलै नाजायज कुरा हो ।
तराई मधेशमा आन्दोलनले उत्कर्षमा पुग्न थालेपछि नयाँ संविधानको परिमार्जन सन्दर्भमा पनि चर्चा हुन थालेको छ । सत्तापक्ष र विपक्षीदलले साझा सहमति बनाउन त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्ने नियत भएको भए ठूला दलले यतिका दिन आन्दोलन हँुदा पनि पटक पटक वार्ता भए पनि ठोस प्रस्तावका साथ सरकार प्रस्तुत भएको छैन् ।
यसले मधेशी र थारुका मागप्रति उनीहरु अलिकति पनि गम्भीर भएको देखिदैन् । अर्कोतिर ठूला तीन दलमा मधेशी र थारुका माग सम्बोधन गर्ने इच्छा छ भने त्यसका लागि वार्ता पनि गर्नु पर्दैन । जुन मुद्दा र मागका विषयमा वार्ता गर्न चाहन्छन्, त्यो विषयमा वार्ता भएर सहमति पनि भइसकेका छन् । त्यसैले वार्ताको औचित्य पनि छैन । आन्दोनकारी शक्तिहरुले पनि सोधिरहेका छन् कि वार्ता केको लागि ? आन्दोलनकारीका सबै माग संविधानसभा र ठूला पार्टीलाई थाहा छ । त्यसैले आन्दोलनकारीहरुले भनिरहेका छन् कि हाम्रा माग सम्बोधन गरिदेऊ, वार्ता गर्नुपर्दैन ।यो मूलतः अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायलाई वार्ताप्रति गम्भीर छौं भन्ने देखाउन र सार्वजनिक खपतका लागि वार्ताको नाटक गरिएको हो । वास्तवमा भन्ने हो भने पीडित समुदायलाई थप अधिकार दिनेतर्फ तीन ठूला दलको कुनै रुचि र चासो छैन ।
मधेशी र जनजाति राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने यी मुद्दाहरु धेरै पुराना हुन् । मुद्दा जतिजति पुरानो हुँदै गएको छ । आन्दोलनमा क्रान्तिकारिता पनि त्यति नै थपिँदै गएको छ । पहिलेको तुलनामा जनताको चेतना स्तर अत्यन्तै उच्च भइसकेको छ । लोकतन्त्रमा जनताको चेतना उच्च र अदम्य साहस हुने भएकोले आन्दोलन मुद्दामुखी आन्दोलन हुने गर्दछ । त्यसैले मधेशी र जनजातिको मुद्दा यति सशक्त र मुखर छ कि यसलाई कसैले रोक्नै सक्दैन । साँच्चिकै यतिबेला मधेशमा दन्किएको आगो कसले निभाउने हो ? भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक छ । किनभने सबै आआफ्नै सुर र तालमा मस्त छन् । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक दलले बनाउन लागेका साझा सहमतिलाई आन्दोलनलाई सम्बोद्धन गर्ने गरी अन्तिम निकास खोजेर मुलुकमा शान्ति, समून्नति तथा सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्न तर्फ सबैले पहल गर्नुपर्छ ।